Juuk anowedzera mutsara mutsva wematehwe ematehwe eApple Watch | Ndinobva mac
Juuk anowedzera mutsara mutsva wematehwe ematehwe eApple Watch
Pasina mubvunzo, iyo Juuk yakasimba inoita inoshamisa dhizaini basa nemabhande ayo. Imwe nguva yapfuura takave nemukana wekuyedza tambo yaJuuk Vitero, ikozvino isu tine imwe hombe tambo mumaoko edu, iri modhi kubva kuunganidzwa nyowani weItaly matanda ematehwe, iye Juuk Monza.
Iyi nyowani nyowani inowedzera maviri akasiyana mamodheru ayo anotarisana nevanhu vanofarira matehwe ematehwe, vese vane yakanyatso nyatso dhizaini. Mune ino kesi Pamusoro pekuvhurwa kutsva, isu tinofanirwa kutaura nezve 20% dhisikaundi inowedzerwa naJuuk pane aya mabhande matsva kupemberera Zuva raAmai, saka inogona kunge iri nguva yakanaka yekutenga kwako.
1 Juuk Monza naJuuk Viteza
2 Kuvhara kwetambo uye kugadzirisa
3 20% dhisikaundi pamutengo wako
4 Pfungwa yeMupepeti
Juuk Monza naJuuk Viteza
Mune ino kesi tambo yatinofanira kuyedza ndeye Monza modhi, pane imwe yeganda modhi inonzi Viteza uye mukati meumwe neumwe wavo tine mukana wekuona akasiyana apedza maererano nemavara inowanikwa. Girinhi, bhuruu, yakajeka bhuruu, tsvuku pamativi uye yakasviba mavara paganda senge brown, grey, kana ganda. Ose maviri mamodheru ane epamusoro emhando yekupedzisa uye dehwe rinoshandiswa rinouya kubva kuItari. Ma modhi ese ari maviri anowanikwa chete uye chete kwema 42mm mawachi, zvinokwanisika kuti anozoburitswa gare gare kune madiki asi parizvino hapana kuwanikwa.
Kuvhara kwetambo uye kugadzirisa
Mune ino kesi, iyo clasp inogadzirwa nesimbi isina chinhu, inowanikwa mune maviri mavara kuti ienzane nenzvimbo grey kana sirivheri modhi, uye zvakare inoshandura ruvara rwechinamira kune wachi pachayo, ichitaridzika chaizvo yakanaka kana yaiswa. Nezve kuvharwa taura kuti zvinotitendera kukwana kwakakwana kune saizi yechiuno.
Kuti uigadzirise, muvharo mudiki unosimudzwa, unofamba uchienda mumakomba ari mutambo pachawo kune medhi yedu uye tinoigadzirisa nekukurumidza uye nyore. Zviripachena kuva zviri pamutemo ganda isu tinofanirwa kufunga nezvazvo pakutanga ivo vakaomarara zvishoma, asi nekufamba kwenguva uye nekushandisa vanozoumba zvakakwana kune yedu ruoko.
20% dhisikaundi pamutengo wako
Kana isu tichitaura nezvaJuuk, isu tinotaura nezve zvemhando tambo uye zviripachena kuti mutengo unowanzo kuve wakakwira kune urwu mhando tambo. Iye zvino uye kwenguva yakati rebei ivo vane chinoshingairira kusimudzira kupemberera Zuva raAmai matinogona kuchengetedza 20% yemutengo chaiwo. Kune izvi, kana tangoita kutenga tambo yatinofanira wedzera kodhi: juukmom2018 Aya maviri maJuuk mhando itsva atove kuwanikwa pawebhusaiti yeiyi firm.
Kudzokorora kwe: Jordi Gimenez
Kugadzira zvinhu uye dhizaini
Haina ye 38mm modhi
Chaicho cheganda, zvimwe "chakaomarara" kana chitsva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Juuk anowedzera mutsara mutsva wematehwe ematehwe eApple Watch
Mwedzi mumwe chete kuti uende kusvika WWDC 18 yakakosha, chii chatingatarisira kubva kwazviri?
Iyo HomePod inogona kukurumidza kusvika kuGerman, France neJapan, maererano nekudonha